I-Case of Deception, Sex, Greed and Murder
UTeresa noJulian Lewis
Ngo-Ephreli 2000, uTeresa Bean, oneminyaka engama-33, wadibana noJulian Lewis eDan River, Inc., apho babesetyenziselwe zombini. UJulian wayengumhlolokazi onabantwana abathathu abadala, uJason, uCharles noKathy. Ulahlekelwe ngumfazi kwixesha elide kunye nobunzima ngoJanuwari waloo nyaka. UTeresa Bean wayeqhawule umtshato kunye nentombazana eneminyaka eyi-16 ubudala okuthiwa nguChristie.
Kwiinyanga ezimbini emva kokudibana, uTeresa wathuthela noJulian kwaye bakhawuleza batshata.
NgoDisemba 2001, unyana kaYulian, uJason Lewis, wabulawa engozini. U-Julian wathola ngaphezu kwama-200,000 kwi-inshorensi yobomi bomshuwalense, owambeka kwi-akhawunti engayifumana yona kuphela. Kwiinyanga ezimbalwa kamva wasebenzisa le mali ukuthenga iihektare ezintlanu zomhlaba kunye nekhaya elisePittsylvania County, eVirginia, apho yena noTeresa baqala ukuhlala khona.
Ngo-Agasti 2002, unyana kaYulian, i-CJ, i-reservist ye-Army, yayikuza kuxela umsebenzi osebenzayo kunye no-National Guard. Ngethuba lokuthunyelwa kwakhe e-Iraq, wathenga umgaqo-nkqubo we-inshorensi yobomi kwimali engama-250,000 kwaye wabizwa ngokuba nguyise njengowona mzuzwana oyintloko kunye noTeresa Lewis njengomcebisi-nkonzo.
Ehlobo le-2002, uTeresa Lewis wadibana noMateen Shallenberger, 22, kunye noRodoney Fuller, 19, ngelixa bethenga kwiWalMart. Ngokukhawuleza emva kokuhlangana kwabo, uTeresa waqalisa ubudlelwane bezesondo noShalenberger. Waqala ukulinganisa iilwimi zamadoda kunye kwaye ekugqibeleni walala naye bobabini.
U-Shallenberger wayefuna ukuba yintloko yentsimbi yokusabalalisa iziyobisi, kodwa wayefuna imali ukuze aqalise. Ukuba oko kwahluleka ukumsebenzela, umnqophiso wakhe olandelayo kukuba yi- hitman eyaziwayo kwisizwe.
U-Fuller, ngakolunye uhlangothi, akazange akhulume kakhulu malunga nayiphi na iinjongo zakhe zekamva. Wabonakala enelisayo emva kukaShalenberger ngeenxa zonke.
UTeresa Lewis wazisa intombazana yakhe eneminyaka engama-16 ubudala kwindoda, kwaye, ngelixa emele kwindawo yokupaka, intombi yakhe kunye noFiller balala ngesondo esinye, ngoxa uLee noShalenberger balala ngesinye isithuthi.
Inkqubo yo bulala
Ekupheleni kukaSeptemba 2002, uTeresa noShalenberger baceba icebo lokubulala uJulian baze babelane ngemali awayeza kufumana kuyo.
Isicwangciso kwakufuneka ukuphoqa uJulian endleleni, umbulale, kwaye wenze ukuba kubonakale kubuphangi. Ngo-Oktobha 23, ngo-2002, uTeresa wanika amadoda ayi-1,200 i-$ ukuthenga izibhamu kunye neempahla ezifunekayo ukuze baphathe isicwangciso sabo. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba babulale uJulian, imoto yesithathu yayiqhuba ngokusondeza imoto yakwaJulian ukuba abafana bamphoqe.
Abo bathathu baqulunqa isicwangciso sesibini sokubulala uJulian. Baye banquma ukubulala unyana kaYulian, uCJ, xa ebuyela ekhaya ukuya emngcwabeni kayise. Umvuzo wabo kwesi si cwangciso yayiza kuba nefa likaTeresa uze ukwabelana ngemigaqo-nkqubo yobomi bomshuwalense kababa kunye nendodana.
Xa uTeresa efumene ukuba uCJ wayeceba ukutyelela uyise kunye nokuba uhlala kwikhaya laseLista ngo-Oktobha 29-30, 2002, isicwangciso satshintsha ukuze ubaba nendodana babulawe ngexesha elinye.
Ngethuba lokusa kwenyanga ka-Oktobha 30, 2002, uShalenberger no-Fuller bangena kwikhaya leLebhu ehambayo ngasemva komnyango uTeresa awayewushiyile. La madoda mabini aphethe izibhamu uTeresa uthenge zona
Njengoko bangena kwigumbi lokulala, bafumana uTeresa elele kufuphi noJulian. U-Shallenberger wamvusa. Emva kokuba uTeresa ehambele ekhitshini, uShalenberger udonsa amaxesha amaninzi uJulian. UTeresa wabuyela kwigumbi lokulala. Njengoko uJulian wayilwela ubomi bakhe, wambamba ibhulukhwe kunye nekhredithi waza wabuyela ekhitshini.
Ngoxa uShalenberger wayebulala uJulian, u-Fuller waya kwikamelo lokulala likaCJ waza wamdubula amaninzi. Emva koko wajoyina amanye amabini ekhitshini njengoko bebethemba isikhwama sikaJulian. Exhalabile ukuba i-CJ isenokuba isaphila, u-Fuller wathatha uSolenberger wadutshulwa waza waphosa i- CJ kabini .
U-Shallenberger no-Fuller bashiya ikhaya, emva kokuthatha ezinye iibhola zebhola kunye nokudibanisa i-$ 300 efunyenwe kwisikhwama sikaJulian.
Kwimizuzu engama-45 elandelayo, uTeresa wahlala ngaphakathi ekhaya waza wambiza ukuba ngumama wakhe owayengumama, uMary Bean, kunye nomhlobo wakhe omhle, uDebbie Yeatts, kodwa akazange abize amagunya ukuba ancede.
Malunga no-3: 55, uLuke wabiza u-9.1.1. waza wabika ukuba indoda yaphule endlwini yayo malunga ne-3:15 okanye ngo-3: 30 ekuseni. Waqhubeka wathi umngene wangena kwigumbi apho yena nomyeni wakhe belele khona. Wamxelela ukuba avuke. Emva koko wayilandela imiyalelo yomyeni wakhe ukuya kwindawo yokuhlambela. Ukuzikhiya kwisitya sokuhlambela, wava ezine okanye ezinhlanu zokuqhuma izibhamu.
Abaphathi be-Sheriff bafika kwikhaya laseLee malunga no-4: 18 AM uLee watshela abaphathi ukuba umzimba womyeni wakhe wawuphantsi kwendlu yokulala egumbini lokulala kwaye umzimba wakhe wesigumbi wawusekwelinye igumbi. Kodwa xa amagosa angena kwigumbi lokulala, kunjalo, bafumana uJulian walimala kakhulu, kodwa esaphila aze athethe. Wayekhala kwaye wathi, "Bantwana, umntwana, umntwana, umntwana."
UJulian watshela amagosa wakhe umfazi owazi ukuba ngubani owamdubule. Wafa kungekudala emva koko. Xa waziswa ukuba uJulian noCJ bafile, uTeresa akazange abonakale kubaphathi ukuba bacaphuke.
"Ndilahlekile Xa Uphelile"
Abaphandi bathetha noTeresa. Olunye udliwano-ndlebe wathi uJulian wayemhlasele ngokwenyama iintsuku ezimbalwa ngaphambi kokubulala. Nangona kunjalo, wamkhanyela ukumbulala okanye wayenolwazi malunga nokuba ngubani oye wambulala.
UTeresa wachaza nabaphandi ukuba yena noYulian bathethe kwaye bathandaza ndawonye ngalobo busuku. Xa uJulian wayelele embhedeni, waya ekhitshini ukupakisha isidlo sasemini ngosuku olulandelayo. Abaphandi bafumana isikhwama sasemini kwifriji ngenqaku eliqhotyoshelweyo elithi, "Ndiyakuthanda. Ndiyathemba ukuba unemihla enhle. "Wayeveze nomfanekiso" ubuso obuhle "ebhokheni waza wabhala ngaphakathi kuyo," Ndikukhumbula xa usuhambe. "
UTeresa wabiza intombi kaYulian ngo-Kathy ngobusuku obubulalayo waza wamxelela ukuba wayesele enze amalungiselelo afanelekileyo kwindlu yokungcwaba, kodwa wayefuna amagama amalungu entsapho kaYulian. Waxelela uKathy ukuba kwakungekho mfuneko ukuba eze ekhaya lokungcwaba ngolu suku olulandelayo.
Ngomhla olulandelayo uKathy wabonisa ekhaya kwikhaya lokungcwaba, uTeresa wamxelela ukuba nguye yedwa ofumana inzuzo kuyo yonke into kwaye loo mali yayingeyona nto.
Kamva ngaloo nto, uTeresa wabiza umphathi weJulian, uMike Campbell, wamxelela ukuba uJulian ubulele. Wabuza ukuba angathatha i-payan paycheck. Wamxelela ukuba ikhefu yayikulungele ngo-4 PM, kodwa uTeresa akazange abonise.
Kwakhona wazisa ngolwazi lokuba ngu-secondary benefit of CJ yempilo yomshuwalense wobomi bomkhosi. I-Booker yamxelela ukuba uya kuqhagamshelana naye kwiiyure ezingama-24 malunga nokuba uza kufumana njani inzuzo yokufa kweCJ. imali.
Ngomhla wemingcwaba, uTeresa wabiza intombi kaYulian uKathy ngaphambi kweenkonzo.
Watshela uKathy ukuba wayebe neenwele kunye nezipikili zakhe zenziwe, kwaye wayethenge i-suit enhle ukuba agqoke emngcwabeni. Ngethuba le ngxoxo naye wabuza ukuba uKathy unomdla ekuthengeni ikhaya likaYulian.
Abaphandi bafunda ukuba uTeresa uzame ukurhoxisa i-$ 50,000 kwi-akhawunti yeYulian. Wayenomsebenzi ombi wokumisela isayinwe kaJulian kwisheke, kwaye umqeshwa webhanki wenqabe ukuyihlawula.
Abaphengululi bafunda noTeresa wayesazi ukuba wayeza kufumana imali engakanani ekufeni komyeni wakhe kunye nezingane zakhe. Kwiinyanga ngaphambi kokufa kwabo, wayevalele ukuxelela umngane imali ehlawulwa ngayo imali, ukuba uJulian noCJ bafe.
"... Kanye nje ngokuba ndifumana iMali"
Kwiintsuku ezintlanu emva kokubulawa, uTeresa wabiza uLt. Booker ukuba acele ukuba unikwe iziphumo zeCJ. ULt. Booker wamxelela ukuba iziphumo zomntu ziza kunikwa udade kaCJ uKathy Clifton, osondeleyo kwisihlobo sakhe. Oku kwacaphukisa uTeresa kwaye waqhubeka ecinezela ingxaki ngeBooker.
Xa uLt. Booker wenqaba ukukhawuleza, waphinda wabuza ngemali yomshuwalense wobomi, wamkhumbuza kwakhona ukuba wayengumncedisi wesibini. Xa uLt. Booker wamxelela ukuba uya kuhlala enelungelo le-inshorensi yobomi, uL Lewis wathi, "Kuhle. UKathy angaba nayo yonke imiphumo yakhe xa nje ndifumana imali. "
NgoNovemba wesi-7, 2002, abaphandi baphinde badibana noTeresa Lewis baza bafaka ubungqina bokuba babenxamnye naye. Emva koko wavuma ukuba wayemnike uShalenberger imali yokubulala uJulian. Uthi u-Shallenberger wayenabo bobabili uJulian noCJ phambi kwemali kaYulian baze bashiye ikhaya.
Uthe uShalenberger wayekulindele ukuba athathe isiqingatha semali yomshuwalense, kodwa ukuba wayitshintshile ingqondo yakhe waza wagqiba ekubeni ufuna ukugcina konke oko. Wahamba kunye nabaphenyi kwikhaya likaShalenberger, apho wayemchazela khona njengomqabane wakhe.
Ngomhla olandelayo, uTeresa wavuma ukuba wayengathembekanga ngokupheleleyo: wavuma ukubandakanyeka kuka-Fuller ekubulaweni kwaye indodakazi yakhe eneminyaka eyi-16 yayincedise ngokucwangcisa ukubulala.
UTeresa Lewis Pleads Ulwaphulo
Xa igqwetha linikezelwa ngecala lokubulala njengento enzima njengoko imeko kaLebhu yayingumntu, umgomo usulela ukuzama ukufumana umthengi ongenacala, ukuzama ukuphepha isigwebo sokufa.
Ngaphantsi komthetho waseVirginia, ukuba ummangalelwa unetyala lokubulala ngokutsha , ijaji iqhuba isigwebo esilandelayo ngaphandle kwejaji. Ukuba ummangalelwa unyanzelanga, inkundla yetyala inokumisela ityala kuphela ngemvume yommangalelwa kunye nokuvumelana kwe-Commonwealth.
U-Lewis Furrow kunye noTomas Blaylock, babenamava amaninzi kumatyala amakhulu okubulala kwaye beyazi ukuba ijaji elikhethiweyo lingazange libeke isigwebo sokufa kummeli-mkhulu. Bayazi nokuba ijaji yayiza kugwetyelwa ngokugqithiseleyo ekugqibeleni ubomi phantsi kwesivumelwaniso sakhe esenzileyo kunye nokutshutshiswa, yayingu Lewis ukunikela ubungqina ngokuchasene noShalenberger kunye ne-Fuller.
Kwakhona, babe nethemba lokuba ijaji iya kubonisa ukunyaniseka ekubeni u-Lewis ekugqibeleni wayebambisene nabaphenyi waza waphendukela kwiSalenberger, u-Fuller, kunye nentombi yakhe, njengencedisi.
Ngokusekelwe kule nto kunye neengxelo ezibuhlungu eziye zavela kwi-crime-to-hire-profit benefit, i-avocats likaL Lewis bavakalelwa kukuba ithuba lakhe elifanelekileyo lokuphepha isigwebo sokufa kwakufuneka athethe inetyala aze amnike ilungelo lokusemthethweni lokugwetywa yijaji. Lewis wavuma.
Ngaphambi kokuncenga kukaLee, wahamba novavanyo lobuchule ngoBarbara G. Haskins, umgcini weengqondo oqinisekisiweyo webhodi. Kwakhona wathatha uvavanyo lwe-IQ.
Ngokutsho kukaDkt. Haskins, ukuvavanya kwabonisa ukuba uLee wayephethe i-IQ epheleleyo ye-IQ engama-72. Oku kumbeka kumda webala lobunzima (71-84), kodwa kungekhona okanye ngaphantsi kweqondo lokulibala kwengqondo.
Isazi sengqondo sichaza ukuba uLee wakwazi ukufaka izicelo kunye nokuba wayekwazi ukuqonda nokuqonda isiphumo esinokwenzeka.
Ijaji labuza u-Lewis, ukuqinisekisa ukuba wayeyiqonda ukuba wayenamalungelo akhe kwijaji kwaye uya kugwetywa yijaji ukuya kubomi okanye ejele. Eyanelisekile ukuba wayeyiqonda, ulungiselele inkqubo yokugwetywa .
Ngokusekelwe ebubini bobugebengu, ijaji isigwebe uLee ukuba afe.
Ijaji yathi isigqibo sakhe senziwa nzima ngakumbi kukuba uLee wabambisana nophando kwaye wacela ityala, kodwa njengokuba umfazi kunye nomama wokuthobela amaxhoba, wayezibandakanye "kwigazi elibandayo, ukubulawa kwabantu abangenangqondo , ekhohlakeleyo kwaye engenangqiqo "ngenzuzo," ehambelana nencazelo yento enyantisayo okanye engathandekiyo, eyingozi, isenzo. "
Uthe "wayekhohlise amadoda nentombi yakhe yentombazana kwi-web yakhe yenkohliso kunye nesondo kunye nokuhaha nokubulala, kunye nexesha elincinci elincinci lokuhlangabeza amadoda, wayebaqeshe, wabandakanyeka ekucwangciseni nasekuzaliseni le mibula , kwaye ngeveki enye ngaphambi kokuba abulawe yinto ephumelelayo ebomini bukaYulian. "
Wamthiya "intloko yale nyoka," wathi wayeqinisekile ukuba uLuli walinda de wacinga ukuba uJulian ufile ngaphambi kokuba abize amapolisa kwaye "wamvumela ukuba ahlupheke ... kungekho nantoni na, ngokubanda. "U
UTeresa Lewis wabulawa ngoSeptemba 23, 2010, ngo-9 ngoMsombuluko ngejoza elibulalayo, kwiGround Correctional Centre eJarratt, eVirginia.
Bambuzwa ukuba wayenamazwi okugqibela, uLee wathi, "Ndifuna nje uKathy ukuba ndiyamthanda." Ndiyaxolisa. "
UKathy Clifton, intombi kaYulian Lewis kunye nodade kaCJ Lewis, waya kwi-execution.
UTeresa Lewis wayeyindoda yokuqala yokubulawa kwimeko yaseVirginia ukususela ngowe-1912, kunye neyokuqalakazikazi kwimeko yokufa ngesilenze esibulalayo
Amadoda atshayayo, uShalenberger no-Fuller, bagwetywa ejele. U-Shallenberger uzibophe entolongweni ngo-2006.
UChristie Lynn Bean, intombi kaLuke, wakhonza iminyaka emihlanu entolongweni ngenxa yokuba wayesazi iqhinga lokubulala, kodwa wahluleka ukubika.
Umthombo: UTeresa Wilson Lewis v. Barbara J. Wheeler, Warden, iZiko leeNkokheli zoKhuseleko lwaBasetyhini
Imivuzo kaMongameli Ngomnyaka
I-VBA - I-Visual Basic Working Partner
Ukudibanisa iiVebhu zesiTaliyane kwixesha elincinci
Ixesha Elililungele Ukuthumela Izipapasho Zesiqu?